Akụkọ - Otu esi enweta ntụkwasị obi nke ndị ahịa na imekọ ihe ọnụ
Esi na ntụkwasị obi nke ndị ahịa na mbụ imekọ ihe ọnụ
Banyere igwe ihe eji eme ahia nke na-azuta n'aka ndi ahia si mba ozo, olee ihe ndi bu ihe kacha mkpa nke ahia a?
Ugbu a, ọ ga-amasị anyị ịtụle okwu a site na otu n'ime ikpe anyị nwetara n'oge na-adịbeghị anya.
Ndabere: Cali sitere na otu n'ime ndị na-emepụta ihe na Los Angeles, USA, ụlọ ọrụ ahụ kwesịrị ịzụta White winter fir na-esi ísì ụtọ ihe ịchọ mma gburugburu kalama labeling machine maka karama rọba 25ml na osisi osisi 6. Olee otú anyị ga-esi mee ihe a?
1.Ichọpụta nsogbu ndị ahịa chere: Ọ dịtụbeghị mgbe ha si China nweta. Emezuru ihe ha nwetara na mbu site na Ebay; Yabụ na ha enweghị ahụmịhe zuru oke n'okwu ndị ọzọ dị mkpa na azụmaahịa mba ụwa.
Iji maa atụ, ha chọrọ igwe ahụ ngwa ngwa, mana ha atụleghị ụdị igwe nrụpụta a na-ahazi dịka ihe onye ahịa chọrọ si dị, ọ ga-achọkwu oge. Mana ha gbakọọ ụbọchị mbupu. Enwekwara ihe ndị ọzọ ga-emetụta nnyefe nnyefe, dị ka ụgwọ TT, ha enweghị ahụmịhe ụbọchị ole ọ ga-abata na akaụntụ anyị. Ya mere, anyị kwesịrị ịtụle inye ndụmọdụ kachasị mma otu anyị ga-esi nweta ụgwọ ha dịka o kwere mee ka anyị wee nwee ike ịmalite ọrụ n'oge na-adịghị anya.
2.N'ihi nsogbu ndị dị n'elu, anyị kwesịrị ịzaghachi ndị ahịa ọkachamara ozugbo enwere ike ịchekwa oge.
3.Enye ndị ahịa ndị kwesịrị ekwesị amaghị na. ndị injinia anyị na-eji CAD eme ihe osise. Ọ na-agụnye inye ihe ntụgharị, inyefe, inkjet coder, igwe nkpuchi karama (gburugburu zuru oke), akụrụngwa akụrụngwa n'elu, okpokoro nchịkọta okirikiri wdg, yana nha na nhazi. N'agbanyeghị onye ahịa bụ ọkachamara azụ ahịa ma ọ bụ na ọ bụghị, anyị na-eme atụmatụ na nkọwa tupu oge eruo.
4.Analyse nsogbu ndị dị ugbu a: Achọghị ka etiti ọkpọ nke ndị ahịa na-adọtaghị, otu esi emesi ike: 1) nkwụsi ike nke akara igwe; 2) a na-emezu njedebe abụọ nke akara ahụ; 3) ọsọ na-eru karama 120 kwa nkeji dị ka onye ahịa chọrọ. Mgbe anyị tụlere okwu a tupu ikpeazu iwu ahụ, anyị tụrụ aro ka izipu karama na akara ngosi ozugbo enwere ike. Mgbe anyị nwetara ihe atụ (karama, akara aha, wdg). Onye injinia anyị gbanwere elele anya n'ihu, gbanwee ka ọ bụrụ ụdị ọkpụkpọ kpakpando iji melite ịdebanye aha ya ruo karama 120 kwa nkeji.
5. Kwadoro iji ikuku ikuku iji jide n'aka na igwe ahụ bịara n'oge na-eche naanị ụbọchị 10 fọdụrụ maka oge mmepụta. N'ọnọdụ a, anyị enyochala usoro niile na ngalaba mmepụta na a ga-ahazi akụrụngwa tupu oge eruo yana ngalaba ọrụ anyị na-arụ ọrụ oge karịa iji mechaa igwe ahụ n'oge dị mkpirikpi iji nweta ihe ndị ahịa chọrọ.
Site na mbọ anyị na-agba, anyị mechara jupụta usoro ntinye aha igwe na ndị ahịa na-arụ ọrụ nke ọma.
Post oge: Dec-15-2019